Sebenzisa ngokuphelele imikhiqizo yomatilasi wasentwasahlobo ukuze uthuthukise ibhizinisi lakho
Kufana nengxenye yokuqala yonyaka, ukukhula kwethu okunamandla kulelikota kuhlomulile endaweni enhle futhi kuqhutshwa indlela amakhasimende asabela ngayo kulokho okuhlangenwe nakho okuyingqayizivele futhi okuthuthukile esikwakha khona. Imali yethu engenayo ye-GAAP ngesabelo ngasinye esiphakeme kune-margin yenzuzo endelekile ebiqhutshwa ngaphansi kwamanani entela alindelekile.
Uhla lwe-Innovative Brand of the PGT lufaka i-CGI ®, PGT®Custom Doors kanye neWindows, I-Filtilog®western windows system, ama-Eze-Breeze®and CGI Ads. Izinhlobo zenkampani ezimakethe zalo ezimakethe zingukukhetha kokuqala kwabakhi bezakhiwo, abakhi kanye nabaninindlu eNyakatho Melika naseCaribbean. Imikhiqizo yabo ephezulu ephezulu kakhulu ngosayizi ojwayelekile nojwayelekile, ngosayizi omkhulu, ivumela okuningi
Abasebenzi asebathatha umhlalaphansi bagijimisa umnyuziyamu wesitimela eMezzanine yesikhungo futhi babelane ngolwazi lokuqala umlando weHamilton Railway. Ithimba lokuhumusha laqokomisa ukwakhiwa nokwakhiwa kabusha kwalesi sakhiwo sedolobha eliyisisekelo. UHamilton Guest House William Plain Building, 158 Mary StreetThese ezintathu Harmilton. Indlu ye-Storey Limestone inesitebhisi esihle se-Central Spiral Staircase, igumbi elikhulu kanye nomnyango wangaphambili kanye nompheme wangaphambili emuva kuDkt.